Tratry fety Reny e! – Zaza no iriako
Alahady 31 May 2015
Miarahaba antsika rehetra e! fa indrindra zay Reny rehetra sy zay mbola ho Reny sy hoan’izay maniry ho Reny amin’ity andro fety androany ty,ka mirary tontolo ‘andro mahafinaritra hoantsika rehetra.
Zay ndray zaho fo tafaverina hanohy resaka fa tsy dia manana vaovao haroso loatra,ka lasa mangingina ny blog,misy manontany ahy ao amin’ny hafatra miafina oe” fa nanao aona tohin’ilay FIV fa toa tsisy vaovao mihitsiny e!”
Ny vaovao tsara azo ambara hatreto dia nivaly ilay fangatahana nataonay momba lay public fundraising ,dia voaray izahay ka dia amin’ny volana Jolay izao ny anjaranay,ka dia miandry ny anjaranay zany zahay.
Faly aloha izay amin’ny io vaovao io satria dia mba tsy mandoa vola apaosy izahay amin’io,eganie mba ho tody amin’ny zay irina. Isaorana Tompo fa fitahiany hatrany mahatonga zao rehetra zao.
Faniriko mafy dia mafy zao,dia mba ho Reny zaho amin’ny fety Reny amin’ny heritaona,mba higogoka zany oe fahasambara zany atao Reny zany. Enganie
Androany koa zaho dia hametraka fisaorana hoan’izay rehetra makahery ahy ao amin’ny hafatra miafina, sy hisaotra anireo namako izay makahery ahy hatrany sy mizaka ny mavetra amiko, mitondra hery lehibe hoahy reo hafatrareo reo. Misaotra betsaka ndrindra ,Tompo anie hamaly soa.
Zay angambany no azo ambara hatreto,fa dia miandry ny tournay zahay,toa mbola ela ihany ilay volana Jolay rehefa tena andrasana.
Misaotra anao namaky hatrany lahatsoratra koa.
Tagged baby, familly, fitaizana, fiv, gasy, malagasy, taranaka, zaza